Guddoomiyaha SONYO Oo Addis Ababa Kula Kulmay Safiirka Somaliland Ee Itoobiya Iyo Ardaydeena Dalkaasi Wax Ka Barata | FooreNews
Home wararka Guddoomiyaha SONYO Oo Addis Ababa Kula Kulmay Safiirka Somaliland Ee Itoobiya Iyo Ardaydeena Dalkaasi Wax Ka Barata
Guddoomiyaha SONYO Oo Addis Ababa Kula Kulmay Safiirka Somaliland Ee Itoobiya Iyo Ardaydeena Dalkaasi Wax Ka Barata
Addis Ababa (Foorenews )- Guddoomiyaha dalladda ururada dhallinyarada Somaliland ee SONYO Md. Axmed Cabdi Wacays oo safar shaqo ku jooga caasimadda wadanka Itoobiya ee Addis Ababa ayaa kulamo kala duwan la qaatay masuuliyiinta safaaradda Somaliland ee Itoobiya iyo guddida ardayda wax ka barata wadanka Itoobiya ee reer Somaliland.
Guddoomiyaha ayaa kulankiisii koowaad waxa uu la qaatay ardayda reer Somaliland ee wax ka barata caasimadda wadanka Itoobiya ee Addis Ababa, isaga oo u kuur galay xaaladda waxbarasho iyo nololeed ee ardayda. Guddoomiyuhu waxa uu dhallinyarada uga waramay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan dhallinyarada reer Somaliland iyo waxqabadkii ugu dambeeyey ee dalladdu ka fulisay dhammaanba gobolada Somaliland.
Dhinaca kale waxa ay ardaydu guddoomiyaha SONYO uga xog warrameen xaaladda ay ku sugan yihiin dhammaanba ardayda reer Somaliland ee wax ka barata wadanka Itoobiya iyo sida waxbarashadoodu u socoto iyo ardaydii dhawaan jaamacadaha dalkaasi ka qalin jabiyay oo ay ku jireen saraakiil dhallinyaro ah oo ku soo takhasusay arrimaha ciidamada iyo difaaca. Guddoomiyaha SONYO Md. Axmed Cabdi Wacays waxa uu mahad-naq ballaadhan u soo jeediyay ardayda iyo dadaalkooda waxbarasho isaga oo ku dhiirri geliyay in ay dalkooda iyo dadkooda wax u soo baranayaan sidaa darteed looga baahan yahay in ay dadaalka laban laabaan oo ay noqdaan kuwo isku duuban, qabyaalad ka dhawrsoon kuna han wayn ka midho dhalinta himiladooda.
Dhinaca kale, guddoomiyaha dalladda ururada dhallinyarada Somaliland ee SONYO waxa uu booqasho ku tagay safaaradda Somaliland ee Addis Ababa isaga oo halkaasi kula kulmay saraakiil uu ka mid yahay safiirka Somaliland ee dalka Itoobiya Md. Aadan Nuux Dhuulle. Masuuliyiinta oo shalay ku kulmay xafiiska safiirka ayaa iska xog warraystay xaaladda dhallinyarada iyo waxqabadka safaaradda Itoobiya iyo sida ay dalka ugu adeegto. Kaftan iyo soo dhawayn kadib, waxa hadalkii ugu horeyn qaatay guddoomiyaha SONYO, Mudane Axmed Cabdi Wacays oo warbixin dheer safiirka ka siiyay waxqabadkii ugu dambeeyey ee SONYO iyo horumarka ay gaadhay 9kii sano ee ay jirtey, isaga oo guddoomiyuhu safiirka u soo koobay mashaariicda ay hadda SONYO dalka ka wado iyo hiigsigeeda mustaqbalka.
Guddoomiyuhu waxa uu sidoo kale uga waramay qorshayaasha horumar ee ay dhallinyarada doonayaan in ay u qabtaan. Waxa uu guddoomiyuhu si gaar ah ugu adkeeyay safiirka in uu ardeyda wax ka barata Itoobiya uu si gaar ah u ogaado horumarkooda iyo isku xidhkooda.
Ambassador Adan Nuux Dhuule, safiirka Somaliland ee dalka Itoobiya ayaa isna soo dhawaynta guddoomiyaha SONYO kadib, uga mahadceliyay sida uu u soo booqday xarunta safaarada. Safiirku waxa uu isaguna dhinaciisa ka xusay hawlaha ay qabtaan iyo horumarkii ay gaadhey intii ay xafiiska joogeen. Waxa uu sheegay in hadda xidhiidhka Somaliland iyo Itoobiya marayo heerkii ugu sarreeyey, taasina ay ku timi dedaalka safaaraddu ugu jirto xoojinta xidhiidhka labada dawladood. Waxa kale oo uu sheegay safiirku in ay u fududeeyaan guud ahaan shacbi weynaha Somaliland hawlaha kaga xidhma dalkan Itoobiya oo ay dhallinyaradu ku jirto maadaama oo ay aaminsanyihiin in dhallinyaradu yihiin jiilka iska leh hogaaminta dalka.
Previous PostMadaxweynaha Somaliland oo magacaabay Wasiirul dawlaha Arrimaha Nabadeynta Gobolada bari Ee Dalka Next PostKulan Casho Sharaf Loogu Sameeyay Qurbajoogga Somaliland ee Dalalka Scandinavian-ka Hotel Crown, Hargeisa